Ry havana, misy fomba telo hampitomboina ny finoana eo amintsika kristiana raha ireo teny nomena antsika anio.
1- FAMPIANARANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA : (Neh 8 :7-9)
Zava-dehibe eo amin’ny fampitomboina ny finoana ny fampianarana izany Tenin’Andriamanitra izany araka ny Neh 8 :7-9. Ny fahaizana ny Tenin’Andriamanitra no ahafahana mamantatra ny sitrapon’Andriamainitra. Teto ireto Jiosy ireto dia tafaverina avy tany amin’ny fahababoana, kanefa tsy dia mahay firy intsony ny teny Hebreo. Ny lalàna, izay sitrapon’Andriamanitra, anefa dia voasoratra tamin’ny teniny ka tsy azon’ny olona tamin’izany fotoana izany. Noho izany dia nilaina ny nampianatra azy ireo izany Tenin’Andriamanitra izany. Tsy ny olona rehetra anefa no mahay izany fa misy ny mpampianatra. Olona voatokana no afaka namaky izany sy nampianatra izany. Ka eto dia marina ilay teny voasoratra hoe:”Atao ahoana moa ny fahay raha tsy misy mampianatra” (Asa 8:31). Rehefa misy ny mpampianatra dia mora ny mandray sy mahazo izay ambara. Izany hoe: manana andraikitra lehibe eo amin’ny fampitomboana ny finoana ny fampianarana ny sitrapon’Andriamanitra na ny Tenin’Andriamanitra eo amin’ny fiaraha-monina.
Ho antsika kosa, afaka ammaky ny Baiboly amin’ny tenin-drazantsika isika, efa tombony lehibe ho antsika izany, ary aoka isika hazoto hianatra izany rehefa miantso ny Mpitandrina sy ny mpanompon’Andriamanitra samihafa, fa mazana isika dia kamo hianatra ny Soratra Masina. Hitantsika eto anefa fa saro-bisy ny fianarana ny Tenin’Andriamanitra raha te-hitombo amin’ny finoana.
2- NY FIHAINOANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA (Lio 10:38-42)
Eto dia misy olona roa mitovy nefa samy hafa. Mitovy satria samy mpanara-dia ny Tompo; tsy sahala satrai tsy mitovy laharam-pahamehana. Ny an’ny iray ny maha-olona no laharam-pahamehana, ny iray kosa dia ny ara-panahy. Raha te-hampitombo ny ara-panahy dia mila manao vahin-dohan-draharaha ny fihainoana ny Tenin’Andriamanitra. Marina fa tena ilaina eo amin’ny fiainana sy ny fanompoana ny mpanompo amin’ny fahazotoana sy ny asa. Saingy, mialoha izany, ny tena ilaina dia fankanesana eo akaikin’ny Tompo ka mihaino Azy. Hoy ny teny voasoratra manao hoe “.... Tiava an’i Jehovah Andriamanitrao amin’ny fonao rehetra ary ny sainao rehetra”. Diso ny fiheverana fa hoe izaho dia tia an’Andriamanitra kanefa izaho dia tsy liana amin’ny fihainoana Azy.
Raha jerena eo amin’ny fiainana, ny fihainoana olona iray dia maneho ny fanaja, ny fitiavana ilay olona. Noho izany raha te-hampitombo ny finoana dia ilaina mandrakariva ny fihainoana ny fanazavana ny Tenin’Andriamanitra, mila maharitra mihaino izany isika.
3- NY FANDRAISANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA (1 Tes 2:13-16)
Izao no nosoratan’i Paoly tamin’ireo Kristiana tany Tesalonika ireto: “rehefa nandray ny tenin’Andriamanitra izay notorianay ianareo, dia tsy noraisinareo ho tenin’olona, fa araka izay marina, dia ny tenin’Andriamanitra, izay miasa ao anatinareo izay mino koa.” Izany koa no itomboana amin’ny finoana: ny fandraisana ny teny torina no tena tenin’Andriamanitra tokoa.
Indraindray manko heverintsika fa tenin’olombelona fotsiny ny toriteny, dia tsy raisintsika. Nefa “ny toriteny dia avy amin’ny tenin’i Kristy”, hoy i Paoly. Koa rehefa torina ny teniny dia Andriamanitra no miteny amin’ny alalan’ny mpitoriteny. Ny anjarantsika mpihaino dia mandray izany ho fahamarinana ivelomantsika. Fa ambaran’i Paoly mazava tsara eto fa “ny tenin’Andriamanitra dia miasa ao anatinareo izay mino”.
Eto am-pamaranana ary, te-hitombo amin’ny finoana ve ianao? Nomena anao eto ny valiny: mianara ny Tenin’Andriamanitra, mihainoa ny Tenin’Andriamanitra ary raiso izany Tenin’Andriamanitra izany.
Ho an’Andriamanitra irery ny vononahitra.